उपत्यकामा बढ्दो साईबर अपराध, साइबर सुरक्षा नीति र व्यवस्थापन पक्ष नै फितलो | Suvadin !
काठमाडाै‌, साउन २८- वर्तमान समय सूचना र प्रविधिको युग हो। हाल देशका दुरदराजमा पनि सूचना प्रविधिलाई सहजै जोडिएको छ । प्रत्येक व्यक्ति यसको यसको भरपूर उपयोग गर्न चाहान्छ नै । उसो त अहिलेको सामाजिक अवस्थामा आफूलाई स्थापित गर्न सूचना र प्रविधिलाई अँगाल्नुपर्ने बाध्यकारी या अत्यावश्यक अवस्था छ भन्दा दुईमत नहोला । तर सञ्चार प्रविधिको सहि प्रयोग भन्दा पनि पछिल्लो समय गलत प्रयोग बढी हुन थालेको पाईएको छ । विकृति या विसंगतिहरू दिनप्रतिदिन उत्पन्न भएका छन् ।
यतिसम्मकी अपराधीहरूले प्रेमको नाटक रच्दै गोप्य सम्बन्धमा रहँदाको अश्लील तस्वीर र भिडियो खिचेर मानसिक यातना दिने र बाध्यात्मक परिस्थितिको अनुचित फाइदा लुट्दै रकममा मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति पनी बढेको छ। जसबाट व्यक्ति विशेष मात्र नभई सिंगो समाज नै प्रताडित बन्न पुगेको देखिन्छ । यसको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा कतिपय ठूला घटनाहरु साइबर गतिविधिबाट नै भएको प्रहरी अनुसन्धानले समेत देखाएको छ ।
साइबर अपराध अन्तर्गत के-के पर्छन् ?
इन्टरनेटबाट हुने अश्लील हर्कत, इन्टरनेटबाट हुने वेश्यावृत्ति, अनधिकृत प्रतिलिपिको बेचबिखन, अनलाइन जुवाका गतिविधि अनलाइन गेमहरू, अनधिकृत वा राज्यले बन्देज गरेका चिजहरूको अनलाइन प्रकाशन, गोपनीयताको चुहावट, सामाजिक सञ्जालबाट दिने गालीगलौज, धम्कीलगायतका गतिविधि साइबर अपराध अन्तर्गत पर्ने गर्छन ।
महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा हाल दिनहुँ साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । साइबर अपराधका उजुरीको अनुसन्धान टेकुबाटै अगाडि बढाईदै आईए पनि सामान्य प्रकृतिका घटनालाई जिल्ला-जिल्लामा हेर्ने गरिएको छ । महाशाखामा विदेशमा बसेर नेपालमा रहेका मानिसलाई आर्थिक असुलीका लागि धम्की दिने, फिरौती माग्नेसममका निवेदनहरु दर्ता हुने गरेका छन् । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, अनलाइनलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध गर्नेको संख्या बढेको महाशाखाले जनाएको छ । यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रहरी भरपुर प्रयास गरिरहेको पनि महाशाखाकाे दाबि छ ।
– इन्टरनेट खुल्ला प्रविधि भएको हुँदा ईन्टेनेटमा व्याक्तिगत विवरण खुल्ला नराखौँ ।
– आफुले प्रयोग गरेका पासवर्ड गोप्य राखौँ र समय समयमा परिवर्तन गरौँ ।
– कुनै पनि अपरिचित ब्यक्तिले पठाएको ईमेल नखोलौँ ।
– सामाजिक संजालमा सबैलाई विश्वास नगरौँ ।
– विद्युतिय कारोवार ऐन अन्तर्गत पिडित भएमा, पिडित भएको मितीले ३५ दिन भित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरौँ ।
– साइवर क्याफे संचालकहरुले साईवरमा आउने ग्राहकहरुको अभिलेख राखौँ।
– संपुर्ण सञ्चार माध्यमहरुले साईवर अपराध सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कार्यमा सहयोग गरौँ ।
साइबर अपराधका घटनाहरू बढ्नुमा राज्यको साइबर सुरक्षा नीति र व्यवस्थापन पक्ष नै फितलो हुनु हो । साइबर अपराधका सबै तथ्यांक प्रहरीसँग छैन । यसकारण साइबर अपराध बिरुद्धको अभियानमा राज्यको नीति र लगानीको खाँचो देखिन्छ । साइबर अपराधलाई बहसको विषय बनाइनुपर्छ । यस्तै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ का प्रावधान अझै फराकिलो बनाएर सबै किसिमका साइबर अपराध न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। अतः सूचना प्रविधि प्रयोगको उत्तम प्रयोग र उपयोग गरेर पनी यसको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ की ?